Marxuum Cabdi Xaaji Goobdoon oo ku geeriyooday Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Marxuum Cabdi Xaaji Goobdoon oo ku geeriyooday Magaalada Muqdisho
Alle ha u naxariisto Cabdi Xaaji Gobdoon oo ahaa ruug-cadaa saxaafadeed isla markaana ahaa la taliyaha arrimaha saxaafada ee xafiiska Ra’iisal wasaaraha ayaa saaka waaberigii ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee Marxuum Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa ka mid ahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku noolaa dalka intii ay dagaalada sokeeye ka socdeen, waxana uu ahaa dhowr iyo siddeetan sano jir.
Allaha u naxariistee geerida marxuun Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa waxaa noo xaqiijiyey walaalkiis Abuukar Xaaji Goobdoon oo wareysi siiyey idaacada starfm, marxuun Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa waxa uu saxaafada bilaabay sanadkii 1961 waxana uu ka soo jeedaa qoyska saxaafada caan ku ah.
Marxuumku wuxuu ahaa afhayeenkii hore ee xukuumadda iyo khabiir saxaafadeed oo ka soo howl galay Radio Muqdisho, isagoo agaasime guud ka soo noqday Wasaaradda Warfaafinta. Waxaan u tacsiyaynayaa ehelkiisa iyo dhammaan bahda warbaahinta.
Midowga Africa iyo Qarmada midoobay ayaa loogu baaqay in ay ku cadaadiyaan dowlada Jabuti in ay cadadiska ka qaadaan mucaaradka
Xasan Sheekh ayaa sheegay in dowladda ay xil iska saari doonto sidii dadkii ku dhaawacmay weerarkii Xeebta Liido oo aan dalka wax loogu qaban karin dalka dibada loogu qadi lahaa